सानेपा ह’त्या प्रकरणः मुनाको देब्रे स्त’नमा दाँतको डोब, विजयको अन्डरवेयरमा वि’र्य ! यस्तो छ निष्कर्ष! – PathivaraOnline
Home > समाज > सानेपा ह’त्या प्रकरणः मुनाको देब्रे स्त’नमा दाँतको डोब, विजयको अन्डरवेयरमा वि’र्य ! यस्तो छ निष्कर्ष!
सानेपा ह’त्या प्रकरणः मुनाको देब्रे स्त’नमा दाँतको डोब, विजयको अन्डरवेयरमा वि’र्य ! यस्तो छ निष्कर्ष!
admin February 12, 2020 समाज	0
काठमाडौं– कामदारमा महिला अंग्रतिको आशक्ति– प्रहरी स्रोतका अनुसार यो हो सानेपामा पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको ह’त्याको कारण।सोमबार बिहान पूर्वसचिव कार्की पशुपतिनाथ जान्छु भनी घरबाट निस्किएका थिए। फर्किंदा र’गताम्य भएर भान्सामा ढ’लेकी थिइन्, कामदार विजय चौधरी अर्कातिर ल’मत’न्न थिए। सीसीटीभी फुटेजअनुसार विजयले मुनालाई प्लास्टिकको पि’र्काले टा’उकामा आ’क्र’मण गर्नुअघि फ्लोरमा पर्खिएर बसेका थिए।
विजयले मुनालाई केही भन्न खोजेको र मुनाले केही अ’स्वीकार गरेजस्तो हाउभाउ फुटेजबाट बुझिन्छ। त्यसपछिको केही समय उनीहरू दृश्यबाट बाहिरिन्छन्। बाहिरिएको दृश्य पनि सीसीटीभीमा देखिन्छ। निस्कनुअघि नै विजयले मुनालाई प्लास्टिकको पिर्काले आ’क्र’मण गर्दा उनी ढ’लेकी थिइन्। तर प्लास्टिकको आ’क्र’मणले मान्छे ठहरै म’र्न भने सक्दैन।
फुटेजमा विजयले मुनालाई केही भन्न खोजेको र मुनाले केही अ’स्वीकार गरेजस्तो हाउभाउ फुटेजबाट बुझिन्छ । उनीहरू नदेखिएको समयमा विजयले मुनामाथि कुनै किसिमको शारीरिक दु’व्र्यवहार गरेको हुनुपर्ने प्रहरीको अनुमान छ। नाइलनको डोरीले आफ्नो घाँ’टीमा पासो लगाए पनि विजयको मृ’त्यु डोरी चुँ’डिएर भुइँमा बजारिँदा टाउकामा चो’टो लागेपछि भएको छ। मुनाको श’व अध्ययन गर्दा उनको देब्रे स्त’नमा दाँतको डा’म रहेको अनुसन्धानकर्मी प्रहरीले बताए भनेर आज माघ २९ गते जनआस्था साप्ताहिकले लेखेको छ।
मुनाको भने श्वासप्रश्वास अव’रुद्ध पार्दै ह’त्या गरिएको छ। विजयको अन्ड’रवेयरभित्र वि’र्य स्खलित छ भने रग’तको डाम पनि छ। मुना महि’नावारी भएको देखिन्छ। मुनाको टाउको र गालामा गहिरो चो’ट छ भने आँखामा नीलडाम छ। विजयको भने हातमा चो’ट र अन्ड’रवेयरमा फो’होर भेटिएको अनुस’न्धानरत प्रहरीले जनाएको छ।
मुनाको श’व अध्ययन गर्दा उनको देब्रे स्त’नमा दाँतको डा’म रहेको अनुसन्धानकर्मी प्रहरीले बताए भनेर आज माघ २९ गते जनआस्था साप्ताहिकले लेखेको छ।प्रहरीको अनुमानअनुसार महि’नावारीका कारण मुनाको शरीर शि’थिल थियो।त्यस्तो अवस्थामा विजयले उनको अंग’माथि अनुचित व्यवहार गर्न खोज्दा केही न केही अस’मझदारी भएको हुनुपर्छ। त्यही असम’झदारीको आवेशमा विजयले उनको ह”त्या गरे।
बिरामी श्रीमतिलाई छाडेर रुदै काठमाडौं आइपुगे विजयका बाबु, छोराले अन्तिम पटक यस्तो भनेका रहेछन – हेर्नुहाेस्
घटना घटेको २ दिन नहुँदै खुल्यो मुनालाई विजय चौधरी ह’त्या गर्नुको कारण ! – हेर्नुहाेस्
उनले फेसबुकमा राम्रो फोटो राखेर केटाहरु यसरी फसाउँदै…
प्रहरीद्वारा कोरोना संक्रमित माथी भाटे कारवाही गरेपछि यस्तो अवस्था! हेर्नुस्
घर नजिकै शारीरिक स म्पर्क गरिरहेका बेला दाजुले बहिनीलाई देखेपछि…! कु टपि टबाट केटाको निधन
प्लेन भित्र मास्क नलगाउँदा यस्तो भयो ब’बा’ल (भिडियो हेर्नुस्)
२४ घन्टामा १० किमी हिडेर प्रेमिका भेट्न पुगे पछि कछुवा …
मलेसियमाबाट श्रीमानले आफ्नै श्रीमतिको गो,प्य अंग र न’ग्न फोटो पठा भन्न थालेपछि…..
जब आफ्नै छोरीमाथि अनैतिक काम भएको थाहा पाएपछि यी बाबुले ६ जनालाई सन्सारबाटै यसरी बिदा गरिदिए
०७८ बैशाख ०४ गते शनिबार, हेर्नुहाेस राशि अनुसार तपाईंहरूको भाग्यफल यस्तो छ...
भूत उतारिदिन्छु भन्दै एक लाख र औठी पनि लिए, अनि त सबै कपडा उतारेर… !